Ikhabhathi yeCrubasdale Lodge - I-Airbnb
Ikhabhathi yeCrubasdale Lodge
Muasdale, United Kingdom
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLinda
Le Khabhinethi yamaplanga ikwindawo entle, iimitha nje ezingama-30 ukusuka elunxwemeni lolwandle, ineembono ezimangalisayo zeziqithi eziselunxwemeni olusentshona lwe-Islay, iJura, iGigha neCara.
Lo mhlaba unomtsalane, ngaphambili wawusihlomelo kwiloji yokuzingela yeVictorian, yenziwe yangoku ukuze ibonelele ngendawo yokuhlala etofotofo. Uninzi lwamagumbi afakwe ngamaplanga, ongeza kwi-rustic charm yeKhabhinethi. Amagumbi aqaqambileyo kwaye onwabile kunye nefenitshala ekhululekile.
Ikhabhinethi ikhutshwa ngendlela yokuziphekela. Ukubhukisha kufuneka kwenziwe ngesaziso seentsuku ezi-3 ubuncinci kwaye ubuncinci beentsuku ezi-3 zokuhlala ziyafuneka.
Kukho amagumbi okulala ayi-3, enye iphindwe kabini kwaye enye ibini ineebhedi ezimbini zomntu omnye. Ibhedi iyafumaneka ukuba iyafuneka.
Igumbi lokuphumla / igumbi lokutyela elibanzi lineengcango zepatio ezikhokelela egadini kunye nenqanaba elisezantsi kwipatio. Igumbi lokuhlambela lifakelwe ishawari, iWC kunye nesitya sokuhlambela. Ikhitshi elenziwe la maxesha lifakelwe ioveni yombane, ihobhi, imicrowave, ifriji kunye nomatshini wokuhlamba ozenzekelayo. Indawo yokomisa iyafumaneka xa iceliwe, kwiveranda engasemva yendlu enkulu.
Umabonwakude onemibala eneFreeview kunye neDVD player ibekwe kwigumbi lokuphumla. Ukufudumeza kombane okulawulwa nge-thermostatically kubonelelwa kuyo yonke indawo, ixabiso elifakwe kwi-tariff.
Zonke iindawo, zangaphakathi kwikhabhinethi zikwinqanaba elinye kodwa ikhabhinethi ayifikeleleki ngokupheleleyo kwaba banokushukumiseka okulinganiselweyo - nceda uqhagamshelane nomninimzi ngolwazi oluthe kratya ngazo naziphi na iimfuno ezikhethekileyo zokufikeleleka.
I-Muasdale imi kumgama oziikhilomitha ezingama-23 kumazantsi eTarbert kunye neekhilomitha ezili-15 kumntla weCampbeltown, kwindlela i-A83. Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuthatha ithuba lezinto ezinomtsalane ezinikezelwa yiKintyre peninsula. Oku kubandakanya iihambo zesikhephe ukuya eGigha, Islay, Jura, Arran okanye Colonsay. Ukuloba, igalufa kunye nokubukela iintaka zonke zinokonwatyelwa kwindawo ekufutshane.
Indlela ekude eyaziwa ngokuba yiNdlela yaseKintyre, igoso-goso ezantsi kwipeninsula yaseKintyre, ibonelela ngamathuba ahlukeneyo okuhamba kubo bobabini abahambi nzulu kunye nabahamba ngokungaqhelekanga ngokufanayo. Iinkcukacha zeendlela zinokufumaneka kwiwebhusayithi ye-explorekintyre ebonelela ngeemephu ezigubungela umgama oziikhilomitha ezili-100 zomgama omde. IKhabhinethi yaseCrubasdale Lodge ibonelela ngesiseko apho ungajonga khona indlela yaseKintyre kwaye wenze isampulu yembonakalo entle esendleleni.
Kumntu othanda umdlalo wamanzi kukho ukusefa okugqwesileyo kunye nokusefa emoyeni eMachrihanish. Kukho iindawo ezinkulu zokuntywila kwi-scuba ezijikeleze usingasiqithi kunye neziqithi, ezinomoya oxinanisiweyo okhoyo eCampbeltown, eSouthend naseTarbert. Kukwakho ezinye iilwandle ezintle ezimhlophe, ezinesanti ezinamanzi acwengileyo acwengileyo kwabo banqwenela ixesha lokuphumla ngakumbi lokuhlola amachibi amatye okanye ukonqena elunxwemeni.
Igalufa inokudlalwa eMachrihanish, eTarbert, eGigha, eCarradale naseSouthend apho kunokwenzeka ukuba udlale kwamanye amakhonkco abalaseleyo kweli lizwe, kodwa ulunyukiswe ukuba kuxakeke kakhulu ngexesha lasehlotyeni.
Ukuba unethamsanqa ungabona iiotters, i-golden eagles kunye namahlengesi. Amaqili aphantse axhaphake njengoongqatyana apha! Ukuba zonke ezinye ziyasilela, zihlala zikho iikati zaseCrubasdale ukuze uhlale ukonwabisa.
Umbuki zindwendwe ngu- Linda
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Muasdale